I-Villa Zaza, i-Oasis in Untouched Nature - I-Airbnb
I-Villa Zaza, i-Oasis in Untouched Nature
Donja Stubica, Krapina-Zagorje, i-Croatia
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Dubravko
U-Dubravko Ungumbungazi ovelele
Indawo yethu enhle itholakala e-cca 40 km ukusuka eZagreb, eZagorje, okungenye yezifunda ezimibalabala kakhulu zezwekazi laseCroatia. I-Estate ilele endaweni emangalisayo eyi-2.000 m2 futhi igcwele izitshalo ezingavamile, izihlahla nezimbali. Ukuma kwezindawo yi-SW-W enikeza izivakashi zombili - ilanga eliningi emini kanye nombono omangalisayo ngokushona kwelanga.
Amaphuzu amathathu abalulekile ale ndawo yi-villa enkulu, indawo yokubhukuda kanye nendlu yezivakashi e-rustic.
I-Main villa izungezwe amathala amabili abanzi angena esitezi esiphansi netafula lokudlela leshumi, ikhishi elihle, elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo. Ikhona le-Bella Vista elinezihlalo ezinhlanu ezinethezekile litholakala engxenyeni esentshonalanga yesitezi esingaphansi - ukubuka nokushona kwelanga kuyamangaza!
Esitezi sokuqala umuntu angathola ikamelo lokulala elikhulu elinethala elikhulu, igumbi lokugezela elihle le-jacuzzy kanye negumbi elincane elinosofa wokudonsa abantu ababili.
Esitezi sesibili kunelinye igumbi lokulala elinemibhede ephindwe kabili, igumbi lokugezela elineshawa yokubhucunga, nendawo yokwamukela izivakashi enetafula lokubhala lakudala futhi ikhiphe isofa ngababili.
Ichibi lokubhukuda lingu-8,5 x 4,5 m, lifakwe umshini wokubhukuda kanye neshawa yelanga.
I-swimming pool ivuliwe kusukela ku-1.5.-15.10.
Indlu yezivakashi iseduze ne-swimming pool. Yindlu engadini enompheme omkhulu. Inekhishi, indlu yokugezela, igumbi lokuphumula, nekamelo lokulala elihle kakhulu esitezi sesibili elibheke indawo yokubhukuda.
Ifa lisendaweni ethule kakhulu futhi ekhululekile egcwele amadolobha amancane, amadolobhana anemikhiqizo yokudla yasekhaya kanye nezinqaba zomlando.
Ngesikhathi esifanayo iseduze kakhulu nenhloko-dolobha yaseCroatia iZagreb (imizuzu engu-30 ngemoto), olwandle lwaseCroatia (ngaphansi kwamahora amabili ngemoto) noma emachibini asePlitvice (imizuzu engu-90 ngemoto).
Ukupheka kwansuku zonke, insiza yokuhlanza ingabuye ihlelwe nguNada wethu omuhle kakhulu ekulungiseleleni amakhono asekhaya.
Woza futhi ujabulele!
Leli ipharadesi langempela nganoma yisiphi isikhathi sonyaka!
We like to travel and we think that airbnb is a good way to explore the world with your family and friends.…
UDubravko Ungumbungazi ovelele